Ha Dere Gbasara Jizọs | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
Ị̀ hụrụ ụmụ nwoke ndị a e sere ebe a?— Aha ha bụ Matiu, Mak, Luk, Jọn, Pita, Jems, Jud, na Pọl. Ha niile nọ ndụ n’ụwa mgbe Jizọs bịara n’ụwa. Ha dekwara ọtụtụ ihe gbasara Jizọs. Ka anyị mụọ banyere ha.
Olee ihe ị ma banyere ụmụ nwoke ndị a?
Atọ n’ime ha bụ ndịozi Jizọs. Ha sokwa ya na-ezi ndị mmadụ ozi ọma. Ị̀ ma aha mmadụ atọ ahụ?— Ha bụ Matiu, Jọn, na Pita. Matiu na Jọn ma Jizọs nke ọma. Onye ọ bụla n’ime ha dere akwụkwọ gbasara ihe Jizọs mere mgbe ọ bịara n’ụwa. Jọn dekwara akwụkwọ a na-akpọ Mkpughe, deekwa Jọn nke Mbụ, Jọn nke Abụọ, na Jọn nke Atọ. Pita onyeozi dere akwụkwọ ozi abụọ dị na Baịbụl. A na-akpọ ha Pita nke Mbụ na Pita nke Abụọ. N’akwụkwọ ozi nke abụọ ahụ, Pita dere na e nwere mgbe Jehova si n’eluigwe kwuo otú obi dị ya banyere Jizọs. Jehova kwuru, sị: ‘Onye a bụ ọkpara m. Ahụrụ m ya n’anya, ọ na-eme ihe dị m mma.’
Ụmụ nwoke ndị ọzọ e sere ebe a dekwara banyere Jizọs. Anyị ga-amụta ihe ndị Jizọs mere ma anyị na-agụ akwụkwọ ndị ahụ ha dere. Aha otu n’ime ha bụ Mak. Ọ dị ka ọ̀ nọ ya mgbe a kpụụrụ Jizọs, ọ hụkwara ihe niile mere mgbe ahụ. Aha onye ọzọ dere banyere Jizọs bụ Luk. Ọ bụ dọkịta. Ọ dịkwa ka ọ̀ bụ mgbe Jizọs nwụchara ka ọ ghọrọ Onye Kraịst.
Mmadụ abụọ n’ime ndị a e sere ebe a bụ ụmụnne Jizọs ndị ọ tọrọ. Ha sokwa dee Baịbụl. Ị̀ ma aha ha?— Ha bụ Jems na Jud. Ha ekwetabughị n’ihe Jizọs nọ na-akụzi. O nwedịrị mgbe ha chere na isi adịghị ya mma. Ma, ha mechara kweta na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, ha ghọzie Ndị Kraịst.
Onye ọzọ e sere n’ebe a bụ Pọl. O so dee Baịbụl. Tupu ọ bụrụ Onye Kraịst, aha ya bụ Sọl. Ọ kpọrọ Ndị Kraịst asị, mesiekwa ha ike. Ị̀ ma ihe mere o ji mechaa ghọọ Onye Kraịst?— Otu ụbọchị, mgbe ọ na-aga ihe, ọ nụrụ ka e si n’eluigwe gwa ya okwu. Ọ bụ Jizọs gwara ya okwu ahụ. Ọ jụrụ Pọl, sị: ‘Gịnị mere i ji na-emesi ndị na-eso ụzọ m ike?’ Ihe a ọ gwara Pọl mere ka ọ gbanwee, ghọọ Onye Kraịst. Pọl dere akwụkwọ iri na anọ dị na Baịbụl. Akwụkwọ ndị ahụ malitere ná Ndị Rom ruo ná Ndị Hibru.
Ọ̀ kwa anyị niile na-agụ Baịbụl kwa ụbọchị?— Ọ bụrụ na anyị na-agụ ya kwa ụbọchị, anyị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere Jizọs. Ị́ gaghị achọ ịmatakwu ọtụtụ ihe banyere Jizọs?—
Ọrụ Ndịozi 9:1-18
Gịnị bụ aha ndị dere ihe ndị Jizọs mere mgbe ọ bịara n’ụwa?
Gịnị bụ aha ụmụnne Jizọs abụọ ndị so dee Baịbụl?
Olee otú Pọl si ghọọ Onye Kraịst?